लेन मिच्नु भो ? होशियार ! अब घरमै फोन आउँछ
काठमाडौं : तपाईं सडकमा सवारी गुडाउँदा कसरी गुडाउनुहुन्छ ? लेनको पालना गर्नुहुन्छ वा हुन्न ? तर, अब सवारी चलाउँदा लेन मिचियो अथवा लेन अनुशासन पालना गर्नुभएन भने होस गर्नुस्, तपाईंको घरमा नै फोन बज्नेछ ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी दुर्घटना कम गर्न र सवारी चालकलाई अनुशासित बनाउन भन्दै उपत्यकामा लेन अनुशासनको पालनामा कडाइ गरेको हो ।
यसका लागि महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘सर्भिलेन्स भेइकल’ राखेको छ ।
महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्तले लेन अनुशासनको पालनामा जोड दिन र सवारी दुर्घटना कम गर्न उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘सर्भिलेन्स भेइकल’ राखिएको बताए । यो खबर आजको ‘राजधानी’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।
सो भेकल विशेष क्यामेरा जडित र चारै क्षेत्रको सडक अनि सवारीको अवस्थाको रेकर्ड राख्न सक्ने विशेष किसिमको रहेको उनले जानकारी दिए ।
पन्तका अनुसार सादा पोसाकमा खटाइएका ट्राफिक प्रहरी र विभिन्न स्थानमा जडित सीसी क्यामेरासहित सडकमा बसेका ट्रफिकसँगै भएको ‘गोब्रो’ क्यामेराले समेत लेन अनुशासनको रेकर्ड राख्नेछ ।
क्यामेराले खिचेका फुटेजका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागसँग लेन मिच्ने वा जथाभावी लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने सवारी धनीको पूरा विवरण मागेर घरमा नै फोन गर्नेछ ।
यसरी फोन गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सवारीले लेन मिचेको जानकारी गराउँदै ट्राफिक कार्यालयमा बोलाउनेछ ।
तीन पटकसम्म पनि आग्रह गर्दा सवारी धनी उपस्थित नभए सवारीसहित चालकलाई नियन्त्रणमा नै लिनेछ भने सवारी धनीलाई लेन मिचेको सवारीको फुटेजसमेत देखाउनेछ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असार २९, २०७५०७:४८
पदबाट निलम्बनमा परेका गणेश थापाले पूर्वसांसद खतिवडालाई दिए यस्ताे धम्की
४६ जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि भारत–पाकिस्तान आमनेसामने, समस्यामा सार्क !
मलाई कसैले पनि टेरेनन्, काम गर्न समस्या भयोः प्रधानमन्त्री
दरबारमार्ग बलात्कार प्रकरण: सामूहिक बलात्कारमा संलग्नमध्ये दुई ठेकेदार, प्रहरीमाथि नै छानविन
गर्भवती बिरालो मार्ने पुरुषलाई २ वर्ष जेल !
जग्गा भाडामै कराेडाैं भ्रष्टाचार : यी २ पूर्वमन्त्रीसहित १४ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
दुईपक्षीय लेनदेनका मामिला नभएको देश कोस्टारिका  किन जाँदैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?